नेपालमै भारतीयको घेरामा सांसद ! | Naya Yougbodh National Daily Free songs
Home / फिचर समाचार / नेपालमै भारतीयको घेरामा सांसद !
Posted by: युगबोध in फिचर समाचार, स्लाइड May 19, 2019	0 78 Views
बाके। नरैनापुरमा हाटबजार लागेको थियो। हाटबजारमा भारतीय पसले र किनमेल गर्न आउनेको संख्या ठूलै थियो। हाटबजारमा पसल थाप्न आएका भारतीय नागरिक देवीदिन विश्वकर्माको साथबाट पा“च किलो चरेस फेला प¥यो। प्रहरीले उनलाई नियन्त्रणमा लियो।
यो घटना शुक्रवार साढे चार बजेतिरको थियो। हाटमा आएका भारतीय पसले, किनमेल गर्न आएका र केही स्थानीयले विश्वकर्मा निर्दोष रहेको भन्दै प्रदर्शन शुरु गरे। सानो झुण्डबाट थालिएको प्रदर्शनले उग्ररुप लियो।
सा“झ ६ बजेतिर प्रदेश सांसद कृष्णा केसी विकास निर्माणको अनुगमन गरेर फर्किने क्रममा नरैनापुरमा आइपुग्नुभएको थियो। प्रहरीविरुद्ध नाराबाजी गर्दै प्रदर्शन गरिरहेका भारतीय र नेपालीले उहा“लाई घेरे। अहिले नै प्रहरी चौकी गएर विश्वकर्मालाई छुटाइदिन दबाबमूलक अनुरोध गरे। ‘के रहेछ भनेर बुझ्न’ उहा प्रहरी चौकी जानुभयो। चरेससहित पक्राउ परेका व्यक्तिलाई सांसदको भनसुनमा छोड्ने कुरै भएन। सांसद केसीले पनि छोडिदेऊ भन्ने कुरै भएन। निर्दोष छ भने प्रहरीले छोडिहाल्छ भनेर सांसद नेपालगञ्ज फर्किन गाडीमा चढ्नुभयो। धेरै भारतीय र केही नेपालीले उहा“लाई घेरे। विश्वकर्मालाई नछोडेसम्म जान नदिने धम्की दिन थाले। गाडीको हावा फुस्काइदिए। पेट्रोल छर्केर आगो लगाउने सुरसार कसे।
सांसद केसीलाई आपत प¥यो। सगै रहेका सशस्त्र र नेपाल प्रहरीले उहालाई सुरक्षित तरीकाले नरैनापुर गाउपालिकाको कार्यालयमा ल्याए। विश्वकर्मालाई छोड्न दबाब दिएको समूहले उग्ररुप देखाइसकेको थियो। प्रहरीको भ्यान, प्रहरीको मोटरसाइकल, वाकीटाकी तोडफोड गर्न थाले। चौकीमा ढुंगामुढा भयो। प्रहरीले राइफलबाट ६२ र पेस्तोलबाट एक राउण्ड हवाई फायर ग¥यो। अश्रुग्या“स हानिरह्यो। सांसद केसीको टोली गाउ“पालिकाको कार्यालयमा प्रहरी घेरामा बस्यो। साझ ६ देखि १० बजेसम्म सांसदको टोली प्रहरी घेरामा बस्यो। बाहिर निस्किए प्रदर्शनकारीले आक्रमण गर्ने वातावरण बनेको थियो। ४० किलोमिटर टाढा रहेको नेपालगञ्ज र कोहलपुरबाट ठूलो संख्याका प्रहरी राति दश बजे पुगेपछि बल्ल सांसद केसीलाई नरैनापुरबाट उद्धार गरिएको थियो। उहा राति २ बजे नेपालगञ्ज आइपुग्नुभयो।
शनिवार नेपालगञ्जमा पत्रकारस“ग कुरा गर्दै सांसद केसीले चार घण्टा उकुसमुकुसमा बिताएको बताउनुभयो।
‘मलाई घेराबन्दीमा पारेपछि चरेससहित समातिएका विश्वकर्मालाई छोडाउन सकिन्छ भन्ने उनीहरुको आशय देखिन्थ्यो’– सांसद केसीले भन्नुभयो– ‘आफ्नै देशमा भारतीय नागरिकको ठूलो संख्याले बन्धक बनाउ“दा अत्यन्त दुःख लाग्यो।’ नरैनापुर जिल्लाको पूर्वी–दक्षिण सिमाना हो।
विकासले समेत पछि परेको नरैनापुरमा सुरक्षाफौजको उपस्थिति पनि कम छ। थोरै प्रहरीको फाइदा उठाएर भारतीय र नेपाली मिलेर चौकीमा पु¥याएका विश्वकर्मालाई थुतेर लैजाने दुष्प्रयास गरेका थिए। त्यहा“ रहेका प्रहरीको लगातार हवाइ फायर र अश्रुग्या“स प्रहार तथा नेपालगञ्जबाट रातारात ठूलो फौज पुगेपछि बल्ल उनीहरु तितरवितर भएका थिए।
जोखिमबाट बच्नुभएकी सांसद केसीले जिल्लाका सुरक्षा अधिकारीलाई तुरुन्त नरैनापुरमा सुरक्षाफौज बढाउन सुझाव दिनुभयो। ‘सुरक्षा जनशक्ति बढाउन र नाका व्यवस्थित गर्न मैले सुझाव दिइसकेको छु’– सांसद केसीले भन्नुभयो– ‘नेपालमा भारतीयहरुले प्रदर्शन गर्नु राम्रो होइन।’ सांसद केसीस“गै रहनुभएका नेकपाका सचिव अशोक कोइरालाले सांसदलाई समेत बन्धक बनाउने समूहको यथाशीघ्र पहिचान गरी कारवाही गर्न माग गर्नुभयो।
यता, प्रहरीले चरेससहित समातिएका भारतीय नागरिक विश्वकर्मालाई नेपालगञ्ज ल्याएको छ। राति नै नेपालगञ्जबाट ठूलो संख्यामा पुगेको प्रहरीले स्थितिलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय, बा“केका प्रवक्ता डिएसपी प्रकाश सापकोटाले अहिले नरैनापुर शान्त रहेको जानकारी दिनुभयो।
Previous: लुम्बिनी भ्रमण वर्ष उद्घाटन, समृद्धिका लागि शान्ति अपरिहार्य ः राष्ट्रपति
Next: हिलाम्मे र धुुलाम्मे खोला कहिलेसम्म ?